News | रक्षाबन्धन
News | Tag: रक्षाबन्धन
अक्षय कुमारलाई अर्को फिल्म
एजेन्सी । बलिउडमा सबैभन्दा व्यस्त र बढी फिल्म गर्ने अभिनेताको रुपमा अक्षय कुमारलाई लिइन्छ ।
आज जनैपूर्णिमाः यसको महत्व र आजकै दिन किन क्वाँटी खाईन्छ ?
काठमाडौं । हिन्दुधर्म अनुसार जनैपूर्णिमा अर्थात रक्षाबन्धन धारण गर्ने (राखी बाध्ने ) र क्वाँटी खाने महान पर्वको रुपमा जनैपूर्णिमा लाई लिइन्छ।
काठमाडौँ । श्रावण शुक्ल पूर्णिमा (जनै पूर्णिमा)का अवसरमा आज देशैभर जनै (रक्षाबन्धन) बाँधिएको छ ।
बलिउड कलाकारले राखी बाँध्दै के भने ?
एजेन्सी । दीदिभाई तथा दाजुभाईको माया सद्भावको प्रतीक रक्षाबन्धनको आफ्नै विशेष महत्व रहेको छ । जसमा साधारण व्यक्ति तथा सेलिब्रेटी सबैको माया भनेको एकै हुन्छ । यसै रक्षाबन्धनको क्रममा बलिउडका कलाकारहरुले राखी बाँध्दै केही कुरा शेयर गरेको छन् ।
विहीबार रक्षाबन्धन मनाइँदै, नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा (ऋषि तर्पणी) पर्व आज देशभर नवयज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदै छ । पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षासूत्र बाँध्छन् ।
तराई मधेशमा धुमधामका साथ मनाइदै रक्षाबन्धन
धनुषा । जनकपुरसहित सम्पूर्ण मिथिलाञ्चल र मधेश क्षेत्रमा दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइको नाडीमा दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै राखी बाँध्दै रक्षा बन्धन पर्व धुमधाम साथ आज मनाइरहेका छन् ।